Antonio Conte Oo Ka Hadlay Abaalmarinta Xiddiga Sannadka PFA Ee Ay U Sharaxan Yihiin Xiddigihiisa Eden Hazard & N’Golo Kante - Wargane News
Home Sports Antonio Conte Oo Ka Hadlay Abaalmarinta Xiddiga Sannadka PFA Ee Ay U...
Tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa diiday inuu doorto xiddiga uu la jecel yahay inuu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka ee PFA ee xiddigihiisa Eden Hazard iyo N’Golo Kante.
Labada xiddig ee Blues ayaa ka mid ah lix ciyaaryahan oo u sharaxan abaalmarinta iyadoo ay kula wehliyaan Harry Kane, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez iyo Romelu Lukaku.
Conte ayaa dareensan in Hazard iyo Kane ay u qalmaan abaalmarinta madaama ay qeyb libaax leh ka qaateen inay Chelsea hogaanka u heyso premier League.
Si kastaba, tababaraha Talyaaniga ayaa diiday inuu midna midka kale ka doorto.
“Waxaan qabaa inay wax weyn u tahay iyaga, waa heer ay gaareen inay ka mid noqdaan musharaxiinta” ayuu yiri.
“Waxaan rajeynayaa inay noqdaan xiddiga ugu fiican sannadkan, waxaana sidoo kale doonayaa inay ku guuleystaan horyaalka. Abaalmarinada waa muhim laakiin waxaa a muhiimsan haddii aad labadaba isku heli karto.
“Laakiin ma jecli inaan kala doorto labadeyda ciyaartooy. Ma ahan wax sax ah. Waxa ay u qalmaan waxa ugu fiican sababtoo ah xilli ciyaareed fiican ayaa soo maray, laakiin waxaan qabaa in dhamaan ciyaartoydeyda ay xilli ciyaareed weyn ku riyaaqeen.
“Waan faraxsanahay sababtoo ah waa dagaal u dhaxeysa labo ka mid ah ciyaartoydeyda iyo afar ciyaartoy oo kooxo kale ah. Waxaan doonayaa inaan arko guuleystaha.”
Somaliland: Abwaan Laabsaalax Oo Cadeeyey Mowqifka Ay Xidigaha Geesku Ka Taagan Yahiin Qaran Nimada Somaliland Una Quus Gooyey Moqdisho